အမြဲကျီစယ်စနောက်နေတတ်တဲ့စုံတွဲဟာ အချစ်ရေးမှာပိုပြီးခိုင်မြဲကြသတဲ့ – Trend.com.mm
Posted on February 25, 2019 February 25, 2019 by Noel
သင်တို့ချစ်သူနှစ်ဦးက တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်အမြဲစနောက်လေ့ရှိပါသလား? ဒါဆိုရင်တော့ သင်တို့ရဲ့အချစ်ရေးက သင်တို့ထင်ထားတာထက်ကို
ပိုပြီးခိုင်မြဲဦးမှာပါ။ဘာလို့လဲဆိုရင် လေ့လာချက်တွေအရ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် အမြဲကျီစယ်နောက်ပြောင်နေတတ်တဲ့စုံတွဲဟာ
အဲ့ဒီလို တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် သူငယ်ချင်းတွေလို အမြဲကျီစယ်စနောက်နေတတ်တာဟာ တစ်ခြားစုံတွဲတွေနဲ့မတူတဲ့ အားသာချက်တစ်ခုပါ။
သာမန်လူတွေတောင် ကိုယ့်ကိုပျော်စေတဲ့သူကို ပိုပြီးသဘောကျတတ်ကြတာမဟုတ်လား။ကိုယ့်ကိုပျော်စေတဲ့ချစ်သူဆိုရင် ပိုပြီး အားကိုးတွယ်တာကြမှာအမှန်ပါပဲ။တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် ကျီစယ်တယ်။စနောက်တယ်။ရယ်မောပျော်ရွှင်ကြတယ် အဲ့ဒီလို Rs တွေဟာ စိတ်ချမ်းသာမှုပိုများပြီး တစ်ယောက်ရဲ့ လိုအပ်ချက်ကိုလည်း တစ်ယောက်က နားလည်ဖြည့်ဆည်းပေးတတ်ကြပါတယ်။ပိုပြီးတော့လည်းတစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် အကောင်းမြင်တတ်ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။
တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်ပျော်ရွှင်စေတယ်။စိတ်ချမ်းသာစေတယ်။စိတ်ကြည်နူးစေတယ်။အဲ့ဒီကနေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ ပျော်ရွှင်မှုဟော်မုန်းဟာ ချစ်သူနှစ်ဦးကြားဆက်ဆံရေးကို ကောင်းမွန်အောင် အများကြီးပံ့ပိုးပေးပါတယ်။ပြဿနာတွေကို လွယ်ကူစွာဖြေရှင်းစေနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ စနောက်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်း ချစ်သူကို နစ်နာအောင်၊ကြောက်လန့်သွားအောင် မစနောက်ဖို့တော့လိုပါတယ်နော်။
Trend ပရိသတ်ကြီးထဲမှာရော ဒီလိုချစ်စရာစုံတွဲမျိုးပါလား??
တစ်မိနစ်အတွင်းလက်မှတ်စောင်ရေအားလုံးကုန်သွားတဲ့ Kim Jong Kook ရဲ့ တစ်ကိုယ်တော်ဖျော်ဖြေပွဲ
2019 ရဲ့Oscars ဆုရှင်တွေနဲ့ ဇာတ်ကားတွေကို တစ်စုတစ်စည်းထဲ ကြည့်ချင်သူများအတွက်